Fa maninona no mpanamboatra PCB maro no mampiakatra ny vidiny amin'ny 2021?
Fa maninona no mpanamboatra PCB maro no mampiakatra ny vidiny amin'ny 2021? ——Ny antony mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny PCB. Topimaso: Tamin'ny taona 2021, nijaly tamin'ny toe-javatra tsy mbola nisy toy izany ny toekarena manerantany ...
Ny fahaiza-mamokatra PCB manerantany dia mihetsika miantsinanana
Ny fanavaozana ara-teknolojia an'i Apple teo aloha dia nitondra fotoana lehibe hanarenana ny rojom-pandraharahana PCB. Ny iphone 8 dia mety hampiditra teknolojia vaovao toy ny boards boards, ka hanokatra revolisiona motherboard vaovao. Ny fanamboarana ny tsipika vokatra dia hifanindry aoriana ...
Kaisheng dia nitazona ny fihaonamben'ny mpamatsy 2016 - fahombiazana tanteraka
“Tombony ho an'izao tontolo izao ny fiaraha-miasa win-win” no vato fehizoron'ny fitantanan'i Kaisheng ny rojom-panomezana. "Ny lalan'ny fahavalo mahery dia toy ny rindrin'ny vy, nefa miaraka amin'ny diany mahery, mandresy antsika ny tampony". Amin'ny fotoana fandaozana ny taloha sy fandraisana ireo vaovao amin'ny 2016, izahay ...
Ny famokarana IC tao anatin'ny dimy volana voalohany tamin'ny 2017 dia nitombo 25,1% isan-taona
Araka ny fiasan'ny indostria mpamokatra fampahalalana elektronika nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny Mey 2017 navoakan'ny Minisiteran'ny Indostria sy ny Teknoloolojian'ny fampahalalana, ny famokarana ny indostrian'ny singa elektronika dia nitohy nihazona fitomboana tsy miova, izay ahitàna faribolana inc ...
Miarahaba an'i KAISHENG nahazo loka “AAA Credit Enterprise”
Tamin'ny 21 Jona 2019, ny isa navoakan'ny SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LIMITED dia navoakan'ny AAA avy amin'ny Association Enterprise Evaluation Association.
Fanadihadiana ny tontolon'ny fifaninanana indostrian'ny birao vita pirinty sinoa amin'ny 2016
Manoloana ny tsindry fifaninanana eran-tany sy ny fanovana teknolojia haingana dia haingana, ny indostrian'ny birao fanaovana pirinty vita pirinty ao Shina dia manafaingana ny hafainganam-pandehany mba hahazoana avo lenta sy zava-bita. Ireo mpanamboatra birao vita pirinty dia zaraina amin'ny faritra enina ao anatin'izany i Shina, Taiwan, Japa ...
Fanamby 5G amin'ny teknolojia PCB
Hatramin'ny 2010, ny tahan'ny fitomboan'ny sandan'ny famokarana PCB manerantany dia nihena tamin'ny ankapobeny. Etsy andaniny, ny teknolojia faran'izay haingana miverimberina dia manohy miantraika amin'ny fahafaha-mamokatra farany ambany. Ny takelaka tokana sy avo roa heny izay nahazo ny laharana voalohany tamin'ny sandan'ny vokatra dia nosoloina tsikelikely ho pro avo lenta ...